मैले श्रुतीलाई भनिदिएँ– विवाह त नेपाली केटासँग नै गर्नुपर्छ ! - Bulbul Samachar
मैले श्रुतीलाई भनिदिएँ– विवाह त नेपाली केटासँग नै गर्नुपर्छ !
bulbul आइतवार, जेठ २२ गते 29 views
राजारानीको सवारी भयो । मलाई त्यहाँका सुरक्षाले त्यहाँबाट हटाउन खोजेका थिए । मैले भनेँ– होइन म कोमल वली, सरकारहरु सवारी भएपछि मात्र जान्छु । त्यहाँ आइपुगेपछि रानी ऐश्वर्या सोझै माथि जानुभयो । राजा तल बस्नुभयो, यत्तिकै टहलिएर । त्यतिबेला मैले राजा वीरेन्द्रलाई भनेँ– सरकार, नमस्कार, म कोमल वली । मैले भनेँ– बधाई छ सरकार, नेपाली जनता, म, हामी खुसी छौँ सरकार । राजा हाँस्नुभयो । केहीबेर त्यहाँ भुलेर म घर फर्किएँ ।